Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ nke gam akporo N | Akụkọ akụrụngwa
Izu a Google kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke gam akporo, nke ọ ga-ekwe omume ibudata nsụgharị gara aga, nke ugbu a anyị nwere ike ịnwale na ngwaọrụ Nexus. A gam akporo N bụ aha nke ụdị ọhụụ a, nke ga-agbanwe aha ya ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ, mgbe a na-ewepụta ya na izu ole na ole wee debe ya na ahịa.
Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ Anyị anwalela gam akporo N a iji wetara gị isi ozi anyị ga-ahụ na ụdị ọhụụ a Sistemụ arụmọrụ nke Google. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe bụ isi atụmatụ nke ụdị ọhụụ a nke gam akporo, mee onwe gị obi ụtọ na ị ga-amata ha n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
2 Ma Ọkwa nwere ọhụrụ imewe
3 Batrị njikarịcha na-akawanye mma na oge a ọ bụ ezigbo
4 Na interface ga-customizable
5 Ọnọdụ abalị ma ọ bụ ọnọdụ abalị
El otutu window Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke gam akporo N na ọ ga-eme ka anyị kewaa ihuenyo anyị abụọ, dịka ọmụmaatụ iji hụ ngwa abụọ n'otu oge. Nke a ga - achọ ọrụ dị ukwuu na ndị mmepe ma ha ga - ekwe ka ngwa ha na - agba ọsọ na - enweghị nsogbu na ọtụtụ windo window arụ ọrụ.
N'ihi ọnọdụ a ọ bụghị naanị Anyị nwere ike kewaa ihuenyo abụọ iji rụọ ọrụ na ngwa abụọ n'otu oge, ma anyị nwekwara ike ịhọrọ oke nke ngwa ọ bụla nọ na ihuenyo.
Na mgbakwunye, na metụtara nke a ọhụrụ gam akporo N mode, anyị nwekwara ike ime ka ihe ngwa na windowed mode ise n'elu na ngwaọrụ anyị. Nke a yiri ihe na - eme na YouTube mgbe anyị belata vidiyo ma chọọ ọzọ.
Ma Ọkwa nwere ọhụrụ imewe
Ebe ngosi ihe ngosi gam akporo agbanwebeghị kemgbe Google kere ya, mana ọbịbịa nke gam akporo N ọ dị ka ọ mechara kpebie ịgbanwe ya ma nye ya ọhụụ. Ya imewe ka ubé gbanwetụrụ na Na mgbakwunye na ọdịdị ọhụụ ya, ọ na-enye anyị ohere ịnweta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa karịa.
Site ugbu a gaa n'ihu, oge ọ bụla anyị gosipụtara ebe ngosi, a ga-egosipụta ahịrị nke akara ngosi, yana ụzọ mkpirisi ise, nke anyị nwere ike ịhazi maka masịrị anyị. Iji nweta akara ngosi niile anyị ga-aga n'ihu na-egosipụta ebe ngosi.
Ihe kachasị mma maka atụmatụ Google ọhụrụ a maka ebe ngosi bụ na-enyere ọtụtụ ndị mmepe aka itinye ngwa ngwa na ngwa. N'oge na-adịghị anya, enwere ike ịnwe ọtụtụ ngwa na-enye anyị ohere ịza ngwa ngwa na ngwa ngwa site na ọkwa ngosi na-enweghị imeghe ngwa ahụ.
Batrị njikarịcha na-akawanye mma na oge a ọ bụ ezigbo
Marshmllow wetara ọtụtụ mmụba na usoro nke nnwere onwe na ndụ batrị, ọ bụ ezie na ọ ga-adaba na ihe anyị tụrụ anya ya. Na gam akporo N, ndozi ndị a nke obodo kwụụrụ onwe ha ga-abụ eziokwu, ọ dịkwa ka ọ dị mkpa.
Ndozi ga - abia dika aturu anya site na doze, nke bụ ọrụ gam akporo nke na-eme ka batrị batrị rụọ ọrụ mgbe ọ na-adịghị arụ ọrụ. Kpọmkwem, ọ na-ebelata ọrụ nke ngwa ndị mepere emepe mgbe onye ọrụ anaghị eji ihuenyo ahụ. Nsogbu nke ọrụ a bụ na ọ na-arụ ọrụ naanị mgbe ngwaọrụ, ma ọ bụ ama ma ọ bụ mbadamba, na-ezu ike n'elu ala.
Na gam akporo N Doze ọ ga - amalite ịrụ ọrụ ma ọ bụrụhaala na enyo enyo na-enweghị enweghị otuọbụlagodi mgbe ngwaọrụ dị na ngagharị. Nke a ga - eme ka njikarịcha batrị dị mma ma kwe ka onye ọrụ nwee ọ enjoyụ na ngwaọrụ mkpanaka ha ogologo oge.
Ugbu a, anyị kwesịrị ịlele na ọrụ ọhụụ gam akporo N a na-arụ ọrụ nke ọma na ọkachasị ma ọ bụrụ na nchekwa batrị dị mkpa. Anyị na-atụ anya na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, dịka nkwa Google, ọ bụghị naanị na ngwaọrụ Nexus, mana na nke ọ bụla emelitere na ụdị ọhụrụ nke gam akporo.
Na interface ga-customizable
Ruo ugbu a, na ụdị dị iche iche nke gam akporo na-abịarute ngwaọrụ anyị, anyị nwere ike ịgbanwe nha nke font ahụ. Nke a nyere anyị ohere ịgụ ozi ndị ka mma. Otú ọ dị site ugbu a gaa n'ihu na gam akporo N anyi nwere ike gbanwee nha nke interface.
Nke a pụtara na site na mmanya na-agba ọsọ, onye ọ bụla nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata nha ihuenyo ahụ. Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-abụ nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ niile nwere nsogbu ọhụụ.
Ọnọdụ abalị ma ọ bụ ọnọdụ abalị
Android 6.0 kwesịrị itinyela ihe a na-akpọ ọnọdụ abalị, ma Google họọrọ ịhapụ yigharia ya, nke edoziri ugbu a. Ọnọdụ a ga-enye ndị ọrụ ohere ịgbanwe agba agba nwere otu aka na ihuenyo ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, imetụ aka otu aka ga-enyere anyị aka ileba anya na ekwentị mkpanaka anyị n'abalị gbara ọchịchịrị na-enweghị nchapu ihuenyo ma ọ bụ agba oyi nke ihuenyo na-agwụ ike n'anya anyị.
Jiri obi ebere Amaghị m nke ọma gbasara atụmatụ ọhụrụ a nke gam akporo N ga-etinye, ma n'ezie ndị niile na-eji ama ama ha ma ọ bụ mbadamba nkume n'abalị ga-eji ọ joyụ dị ukwuu nabata ya.
Ọ bụ ezie na n'ime ndepụta a, anyị enyochala naanị ise n'ime atụmatụ ọhụrụ ndị anyị nwere ike ịhụ na gam akporo, a ga-enwe ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ mgbe mwepụta gọọmentị mere, nke ụbọchị ọ bụla amabeghị.
Ọ dịkwa iche na, dịka o mere n'ọtụtụ oge ndị ọzọ na ọbịbịa nke ahịa gam akporo, atụmatụ ọhụrụ pụtara na ọnọdụ ahụ, ọrụ ma ọ bụ nhọrọ, mana iji chọpụta ha, anyị ga-echere izu ole na ole.
Kedu ihe ị chere gbasara atụmatụ ọhụrụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ na gam akporo N?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ nke gam akporo N
Francisco Hernandes kwuru dijo
Achọrọ m ngwa google ọhụrụ ahụ
Zaghachi Francisco Hernandes carazo
Osisi na nke Zombies Heroes, egwuregwu ohuru iji nọgide na-anụ ụtọ